कोरोना जोखिम हुँदाहुँदै पनि कसरी सञ्‍चालन हुन्छन् होटलहरु ? - Pura Samachar
कोरोना जोखिम हुँदाहुँदै पनि कसरी सञ्‍चालन हुन्छन् होटलहरु ?
काठमाडौं। बन्दाबन्दीपछिको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटनका अन्य क्षेत्र जस्तै होटल क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्दै सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ ।
बन्दाबन्दीको करिब चार महिना व्यवसाय प्रायः ठप्प भएको होटल व्यवसायलाई गतिशील तुल्याउन स्वास्थ्य सजकता र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर व्यवसाय शुरु गर्न लागिएको हो । सरकारले यही साउन १५ देखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै व्यवसायीले अहिले पर्यटकस्तरीय होटलले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । केही होटलहरु भने १५ गतेदेखि नै सञ्‍चालनमा आइसकेका छन् भने केही सञ्‍चालनको तयारीमा छन् । पाँचतारे होटललाई भने शुरुमा केही समस्या हुनसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
तीन तारेसम्मका होटल आन्तरिक पर्यटनले धान्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै विदेशी पर्यटक आउने आसमा व्यवसायीले सञ्चालनको तयारी गरिरहेका हुन् । होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले शुरुमा पूर्ण क्षमताको १० प्रतिशत मात्र होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिने र क्रमशः अवस्था हेरेर क्षमता बढाउँदै लगिने बताए।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरुप ‘देश दर्शन’ कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने ठम्याइका साथ हानले विभिन्न आकर्षक प्याकेज बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए। विदेशी पर्यटकको आत्मविश्वास बढाउन विमानस्थलमा पिसीआर सेन्टर स्थापना गरेर चाडो रिपोर्ट लिन सकिन व्यवस्था मिलाउन सके उपयुक्त हुने व्यवसायीको अपेक्षा छ । साथै अनअराइभल प्रवेशाज्ञा जस्ता योजना ल्याउन सकेको खण्डमा पर्यटन व्यवसाय छिट्टै लयमा फर्कने उपाध्यक्ष शाहले बताए।
होटल सञ्चालनको तयारी गरिए पनि शुरुआति चरणमा पर्यटक अभावले कठिनाइ हुने व्यवसायीको ठम्याइछ । आगामी भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरु हुने भएकाले होटल व्यवसाय क्रमशः सहज हुदैँ जाने उनीहरुको आँकलन छ । होटल व्यवसाय सञ्चालन सुरुआतिका एक सिफ्ट अर्थात् दैनिक आठ घण्टा मात्रै कमभन्दा कम कर्मचारीबाट सञ्चालन गरिनेछ । सामान्य अवस्थामा होटल तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्थ्यो ।